घोडाघोडी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छु « Anumodan National Daily
घोडाघोडी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छु
अमर साउँद सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको हिसावले सुखड, पहलमानपुर र रामशिखरझाला क्षेत्रमा परिचित नाम हो । व्यवस्थापन विषयमा स्नातक पढेका ४३ वर्षिय साउँद २०४६ सालदेखि नै राजनीतिमा जोडिएका भएपनि आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिका रूपमा परिचित गराउन रुचाउँछन् । म प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा संलग्न छैन तर मेरो समाजसेवा नै राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा पनि हुन्छ भन्ने साउँद आफ्नो समाज सेवालाई नै पार्टीले मेरो मूल्यांकन गरेका प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाएको विश्वास गर्छन् । चुनाव जित्नेमा ढुक्क रहेका साउँदसँग प्रस्तुत छ चुनावकै सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३
प्रदेशसभा २ का उम्मेदवार
मतदान हुन थोरै दिन मात्रै रहेको छ तपाईको उम्मेदावरीलाई जनताले कसरी लिएका छन् ?
– जनताहरू मेरो उम्मेदवारीले उत्साहित र खुसी छन् । जनता म जस्तो लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्ति उम्मेदवार पाएकोले खुसी छन् । मतदाताहरूले यो जित्यो भने केही गर्छ भन्ने विश्वास गरिरहेका छन् । अर्कोतिर एमाले र माओवादीका नाममा विभाजित जनता बाम गठबन्धन बन्दा खुसी भएका छन् ।
तपाईले विगतमा कुन कुन सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्नुभयो ?
– मैले सामुदायिक वनको अध्यक्षदेखि लिएर, विद्यालय व्यवस्थापन, त्यस्तै खानेपानी, सहकारी र संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि नै काम गरेको छु । र, जनतामा समर्पित भएकै कारणले मैले टिकट पाएको हुँ । मैले राजनीतिक करणले टिकट पाएको पक्कै पनि होइन । म भन्दा पाका पुराना नेता धेरै हुनुहुन्छ । जनतास“ग मिलेर काम गर्नुका साथै ठूला संस्थासँग काम गरेकै कारणले म जनताकामाझमा परिचित छु ।
तपाईसँग जनताले के के अपेक्षा राखेका छन् ?
– जनता माग धेरै छन । तर धेरैले मुख्यरुपमा यहाँबाट जितेर गएपछि नियमितरूपमा आफूहरूसँग नै सम्पर्कमा रहोस भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । विगतका जनप्रतिनिधिहरू जितेर गएपछि फर्केर नआउने र फेरि चुनावमा मात्रै आउने गर्दछन् त्यसो नगर्न मतदाताले आग्रह गर्ने गरेका छन् । मैले जनताको यही माग अनुसार नियमिति जनतासँग भेट्ने योजना बनाएको छु जसले गर्दा जनताका दुःखसुख थाहा पाउन सजिलो हुनेछ । कान्द्रा नदीको कटानले धेरै दुःख दिएको छ यसको स्थायी समाधान जनताले खोजेका छन् । त्यसैले कान्द्रा नदीमा वृक्षारोपण तटबन्धन गर्न पहिलो पहल गर्नेछु ।
यो क्षेत्रको शिक्षा स्वास्थ्य र सडकको सुधारको लागि के के योजना बनाउनु भएको छ ?
– शिक्षामा विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ । जस्तो यहा“ सुखडमा घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पस, राष्ट्रिय कलेज, नजिकै दशरथ उच्च मावि साडेपानी, यता पहलमानपुरमा बुलबुले बहुमुखी क्याम्पस छ । यी सबै क्याम्पसहरूमा एउटै विषय मानविकी र व्यवस्थापन पढाई हुन्छ । घोडाघोडीको के विशेषता छ र राष्ट्रियको के विशेषता छ त्यो छुट्याउनु प¥यो । जस्तो घोडाघोडी क्याम्पसको विज्ञानमा विशिष्टता छ भने त्यो क्याम्पसले विज्ञान पढाउनुप¥यो । अरू क्याम्पस मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन विषयमा विशिष्टीकरण हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सुविधासम्पन्न अस्पताल छैनन्, त्यसैले यहाँ एउटा सुविधासम्पन्न अस्पतालको आवश्यकता छ र यहाँको जनताको माग पनि हो छ ।
यहाँ दर्जनौ पूलको माग रहेको छ । यहा“का लागि अहिले सानाठूला गरी करिब दुई दर्जन पूलको आवश्यकता रहेको छ । कान्द्रा नदीमा भने ठूलो पूलको आवश्यकता रहेको छ । साथै वडा वडा जोड्न स–साना पूलहरूको आवश्यकता गर्नु अनिवार्य छ । कौहुवामा मात्रै चारवटा पूलको आवश्यकता छ, यस्ता साना पूल मात्रै पनि बनाउन सके यो क्षेत्र यातायातको आधारमा सुगम हुनेछ । यो क्षेत्रमा चक्रपथ (रिंगरोड) को सम्भावना रहेको छ । यो रिंगरोडको परिकल्पना पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ र जनतासँग प्रतिवद्धता पनि गरेको छु । जनचहाना अनुसार यस्ता धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।
तपाईको क्षेत्रमा वनसम्पदा र पर्यटनको सम्भावना पनि छन केही योजना छन् ?
– हो यो क्षेत्रमा वसन्ता, कोरीडोर, बर्कावनुवादेखि चुरे लगायतका धेरै वनसम्पदा छन् । यहाँ अहिले काठ उत्पादन र संकलत हुन्छ । अब हामीले क्षेत्र नम्बर ३ बाट संकलन भएका काठहरूलाई यहि प्रसोधन गरेर सप्लाई गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने हुन्छ साथै औद्योगीकरण पनि हुन्छ । यसबाट हामीले प्रशोधन गरेका वस्तुबाट बढी आम्दानी लिन सक्छौं । यसरी यस क्षेत्रमा काठ प्रशोधन गरेर आर्थिक समृद्धिको कल्पना मैले गरेको छु, सपना देखेको छु ।
यस क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना पनि धेरै छन् । घोडाघोडी ताल, नकरोड ताल, चिडिया ताल, रामगढ, सीताकुण्ड, बुलबुले जस्ता थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रहरू पर्छन् । यसका लागि यहाँ पर्यटकीय सञ्जाल बनाएर पर्यटकीय कोरिडोर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो पछिल्लो एजेण्डा छ ।
कृषि सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यस क्षेत्रका वासिन्दाको प्रमुख पेशा भनेको कृषि हो, जहाँ ९० प्रतिशत वासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । यस क्षेत्रको कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसरी पर्यटन, कृषि, काठको प्रसोधनलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने रोजगारीको सिर्जना हुनेछ ।
अन्त्यमा चुनाव जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
¬ हो म ढुक्क छु । मैले विगतमा निस्पक्ष र निःस्वार्थरूपमा जनताको सेवामा गरेका कामले मेरो जीतलाई सहज बनाएको छ । त्यो भन्दा ठूलो बाम गठबन्धनल गर्दा जनता उत्साहित छन् । अब प्रदेश र केन्द्रमा बाम सरकार बन्ने भएकोले धेरै काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताका छन् त्यसैले चुनाव जित्छु । मैले व्यक्त गरेका योजना पनि जनताले मन पराएका छन त्यसैले म चुनाव जित्छु । स्थानीय चुनावमा एमाले एक्लैले घोडाघोडी जितेको आधार छदैछ । त्यसैमा त्यो चुनावमा दोस्रो भएको माओवादीको साथ पनि मलाई छ ।